मेयरको माछा साम्राज्य (भिडियोसहित)
100836681 2167092 25824649 72844940
270092 2017 3252 264823
झापा जिल्लाको विर्तामोड चोकबाट करिब १ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिम भित्र पसेपछि एउटा विशाल पोखरी देख्न सकिन्छ । उक्त पोखरीको मनमोहक दृश्यले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । स्मरणीय कुरो के छ भने त्यो पोखरी १६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यस भेगमा यस विशाल पोखरीलाई ‘हेभन वाटर पार्क’ भनेर चिनिन्छ ।राजनीतिलाई अक्सर ब्यापार, व्यवसाय वा फुलटाइम जागिर ठान्नेहरूको बाहुल्य छ, हामीकहाँ । यस्तो परम्परागत सोचमा फरक लाग्छन्, विर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार सिवाकोटी । किन पनि भने यो विशाल माछा पोखरी अर्थात ‘हेभन वाटर पार्क’ को सञ्चालक उनै मेयरसाब हुन् ।माछापोखरी तथा सँग–सँगै पार्क । झापा जिल्लामा धेरै पर्यटकीय स्थल रहेका छन् । तर, ‘हेभन वाटर पार्क’ मानव निर्मित यस्तो पर्यटकीय स्थल हो, जो स्थानीय तहमा पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सुरु भएको छ । यति ठूलो माछा पोखरी सहितको पार्क झापामा मात्र होइन, नेपालमा नै पहिलो रहेको भन्नेहरू पनि छन् ।सुनेअनुसार झापा जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ माछा पोखरी सुरु गरिएको थियो । भन्नेहरूले भन्छन् – ‘विर्तामोडका मेयरले माछाको साम्राज्य चलाइरहेका छन् ।’ अर्को शब्दमा भन्नेहरू चाहिँ मेयरले माछा क्रान्ति गरिरहेका छन् भन्छन् । हो, उनी माछाको आफ्नैखाले बजार स्थापित गरेर बसेका छन् ।भारतवाट हुने अत्यधिक आयातलाई सिवाकोटीको यो अभियानले केही हदसम्म रोकेको छ । झापा मात्र होइन, पूर्वका अधिकांश जिल्लामा यही पोखरीका माछा पुग्ने गर्छन् । माछालाई ताजा राखिराख्न प्रयोग गरिने विषको सेवनवाट समेत उपभोक्तालाई जोगाइरहेका छन् मेयर शिवाकोटीले । किनभने उनी जिउँदो माछाको व्यापार गर्छन्, जसमा विष हाल्नै पर्दैन । सँगसँगै माछालाई हाल्ने चारो अर्थात दाना समेत अग्र्यानिक बनाएका छन् उनले ।माछा पोखरी तथा पार्क । दुवै प्रयोजनमा ‘हेभन वाटर पार्क’ आकर्षक मात्र छैन, सफल पनि छ । हिजोआज झापा वा पूर्व पुगेकाहरू यस पार्कमा नपुगी फर्किदैनन् । अर्थात झापाको नयाँ गन्तव्य बन्न पनि सफल हुँदैछ, ‘हेभन वाटर पार्क’ ।यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस् :https://www.youtube.com/watch?v=mua_Pp6JBjw
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १६:३८
झापा जिल्लाको विर्तामोड चोकबाट करिब १ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिम भित्र पसेपछि एउटा विशाल पोखरी देख्न सकिन्छ । उक्त पोखरीको मनमोहक दृश्यले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । स्मरणीय कुरो के छ भने त्यो पोखरी १६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यस भेगमा यस विशाल पोखरीलाई ‘हेभन वाटर पार्क’ भनेर चिनिन्छ ।
राजनीतिलाई अक्सर ब्यापार, व्यवसाय वा फुलटाइम जागिर ठान्नेहरूको बाहुल्य छ, हामीकहाँ । यस्तो परम्परागत सोचमा फरक लाग्छन्, विर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार सिवाकोटी । किन पनि भने यो विशाल माछा पोखरी अर्थात ‘हेभन वाटर पार्क’ को सञ्चालक उनै मेयरसाब हुन् ।
माछापोखरी तथा सँग–सँगै पार्क । झापा जिल्लामा धेरै पर्यटकीय स्थल रहेका छन् । तर, ‘हेभन वाटर पार्क’ मानव निर्मित यस्तो पर्यटकीय स्थल हो, जो स्थानीय तहमा पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सुरु भएको छ । यति ठूलो माछा पोखरी सहितको पार्क झापामा मात्र होइन, नेपालमा नै पहिलो रहेको भन्नेहरू पनि छन् ।
सुनेअनुसार झापा जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ माछा पोखरी सुरु गरिएको थियो । भन्नेहरूले भन्छन् – ‘विर्तामोडका मेयरले माछाको साम्राज्य चलाइरहेका छन् ।’ अर्को शब्दमा भन्नेहरू चाहिँ मेयरले माछा क्रान्ति गरिरहेका छन् भन्छन् । हो, उनी माछाको आफ्नैखाले बजार स्थापित गरेर बसेका छन् ।
भारतवाट हुने अत्यधिक आयातलाई सिवाकोटीको यो अभियानले केही हदसम्म रोकेको छ । झापा मात्र होइन, पूर्वका अधिकांश जिल्लामा यही पोखरीका माछा पुग्ने गर्छन् । माछालाई ताजा राखिराख्न प्रयोग गरिने विषको सेवनवाट समेत उपभोक्तालाई जोगाइरहेका छन् मेयर शिवाकोटीले । किनभने उनी जिउँदो माछाको व्यापार गर्छन्, जसमा विष हाल्नै पर्दैन । सँगसँगै माछालाई हाल्ने चारो अर्थात दाना समेत अग्र्यानिक बनाएका छन् उनले ।
माछा पोखरी तथा पार्क । दुवै प्रयोजनमा ‘हेभन वाटर पार्क’ आकर्षक मात्र छैन, सफल पनि छ । हिजोआज झापा वा पूर्व पुगेकाहरू यस पार्कमा नपुगी फर्किदैनन् । अर्थात झापाको नयाँ गन्तव्य बन्न पनि सफल हुँदैछ, ‘हेभन वाटर पार्क’ ।
यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस् :
‘हेभन वाटर पार्क’, उपभोक्ता, झापा, पर्यटकीय स्थल, माछामा आत्मनिर्भर
Prevनेपालको १०१ स्वर्ण, यो संस्करणमा मात्रै २१ स्वर्ण
यसरी बन्दै छ, झापाको मुटु विर्तामोड (भिडियोसहित)Next
पर्यटकको पर्खाइमा गण्डकीका पर्यटकीय स्थल
उपभोक्ता ठग्दै हुनुहुन्छ ? अब मुद्दा लाग्छ है !
झापामा थप एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
मारमा उपभोक्ता: कृतिम अभाव, मनलाग्दी मूल्यवृद्धि र नाम मात्रको अनुगमन (भिडियो)
कोरोना सङ्क्रमणका कारण झापामा एक वृद्धाको मृत्यु
डुबान र पहिरोबाट झापामा मात्र १७ जनाको मृत्यु
नक्कली बीजक प्रयोग गरी अर्बभन्दा बढी छली
लैनचौरबाट पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ
बालिका बिक्री गर्न भारत लैजाँदै गर्ने युवक पक्राउ
भ्रष्टाचार आरोपमा किर्गिजस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ
आज ९ हजार ८४ जनालाई लगाइयो कोरोनाविरुद्ध खोप
केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : देशभर कोरोनाको खोप अभियान सुरु (भिडियोसहित)
निजी क्षेत्र आर्थिक मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता गर्न तयार
यस्ता छन् आजका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
नेकपा ओली समूहको सभा : सहभागीलाई भत्ता र फरार अभियुक्तलाई फूलमाला !
'अनुशासित प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्न निर्वाचन जरुरी छ' : अर्थमन्त्री पौडेल